Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 18)
Lagu soo bandhigay sanduuqa G-Speed ​​Shuttle ee leh Thunderbold 3, oo leh awood 4 baay iyo 48TB. xawaaraha diskiyada ayaa ah 7200 RPM iyo ilaa 1000 MB / s la aqriyo
Maxaa la sameeyaa haddii rakibidda macOS High Sierra uu noqdo mid musuqmaasuq ah
Maqaalkani wuxuu u heellan yahay shaqaalahayga iyo in ka badan walaashey Lorena Díaz ka dib markii ay soo gaadhay a
Maanta ayaa laga joogaa 10 sano tan iyo markii Steve Jobs uu soo saaray MacBook Air-kii ugu horreeyay
10 sano ayaa laga joogaa markii Steve Jobs uu soo saaray MacBook Air. Waxay ahayd kooxdii ugu xadgudubka badneyd waqtigaas fudeyd, dhuuban, oo aan laheyn disk disk.
Martin Luther King, Jr. ayaa ka soo muuqday shabakada Apple isagoo xasuusanaya dhalashadiisa
Qofkasta oo ahaa difaacaha xuquuqda aadanaha oo qaadaya saliibi aan dagaal aheyn si uu ugu guuleysto xuquuqda madaniga ah ee ...
Podcast 9 × 16: 2107 iyo 2018, hore iyo mustaqbalka Apple
Waxaan bilawnay sanadka waxaanan kubilawnay xamaasad weyn #Podcastapple oo aan inbadan lasamaynay asxaabteena ...
Hubiyay saameynta waxqabadka ee Specter iyo Meltdown ee Macs-kii hore
Imtixaan lagu qaaday dhowr Macs ah laga soo bilaabo 2011 iyo 2013 iyo nidaamyo kala duwan oo hawlgal, si loo xisaabiyo hoos u dhaca waxqabadka ee Specter iyo Meltdown.
Satechi wuxuu ku dhawaaqay 2018w USB-C xeedho badan oo deked ah oo ku taal CES 75
Satechi maanta wuxuu ku dhawaaqay daahfurka xeedho socdaal cusub oo ah 75W USB-C oo ku qalabeysan dekedo badan ...
Cilad ku jirta macOS High Sierra waxay kuu oggolaaneysaa inaad furto dukaamada "doorbidka" oo erey kasta oo sir ah ah
Cilad cusub ayaa lagu ogaadey nooca hadda jira 10.13.2 ee macOS High Sierra. Xaaladdan oo kale waxaad ...
Kiiboodhka cusub ee Aluminium ee loogu talagalay Mac Matias RGB-Backlight
Ma waxaad dooneysaa kumbuyuutar gadaal u ruxaya oo loogu talagalay 'Mac'? Shirkadda Matias waxay ku soo bandhigeysaa ballanqaadkeeda cusub ee qaybtan CES 2018
WD My Cloud Home waa NAS yar oo na siiya dhamaan shaqooyinka inta badan isticmaaleyaashu u baahan yihiin, qiimo aad u jaban iyo xulashooyin badan oo keyd ah.
Apple Watch wuxuu awoodi doonaa inuu xakameeyo shaqooyinka qaar ee qalabka Whirlpool
Noocyo dhowr ah oo Whirlpool ah oo loogu talagalay 2018 waxay yeelan doonaan shaqo la-talin iyo maarayn qalabka korontada ah, laga bilaabo saacadda Apple
OWC waxay suuqa u keentaa ThunderBlade V4, xusuus adag oo cabirkeedu yar yahay iyo xawaare aad u sarreeya. Isticmaalkeeda waxaa loogu talagalay xirfadaha.
Daar jawaabaha Siri sida ogeysiisyada muuqaalka ah ee macOS
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee noocyada ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Mac ayaa ah in Siri uu yimid isagoo tumanaya….
Axadani waa Axad qaas ah 2017-na waa dhamaatay oo waxaan bilaabeynaa 2018. In yar ...
AirPods ayaa mar labaad gabaabsi ah, shirkii guud ee saamileyda ee tiyaatarka Steve Jobs, saxiixyo cusub oo ka socda Apple, Tidal oo hadda ku jira Apple TV iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaa timid maalin ay malaayiin qof isu yimaadaan si ay waqtiyo jacayl ah u qaataan. Qaar badan ayaa sidan sameyn doona ...
Ku maaree emaylladaada Unibox, dalab wakhti xaddidan
Haddii aad ku daashay Mail iyo shaqadiisa oo kooban, waxaa laga yaabaa inay noqoto waqtigii aad isku dayi lahayd waxyaabo kale sida Unibox
Apple wuxuu sii wadaa inuu qoro hawlwadeenno cusub si uu u hoggaamiyo mustaqbalkiisa warfaafinta. Saddexda saxiix ee cusub waxay ka yimaadeen Amazon Studios
2018 wuxuu ku bilaabmayaa loolanka cusub ee ay Apple u soo jeedisay dadka isticmaala Apple Pay
Apple waxay soo jeedineysaa dhacdo cusub oo loogu talagalay dadka isticmaala Apple Watch. Inta lagu jiro 7 maalmood oo isku xigta waa inaan dhameystirnaa saddexda wareeg ee waxqabadka.
Apple Pay waxay sii waddaa inay ku sii socoto bangiyada kala duwan ee adduunka oo inbadan iyo ka badanba ...
Fiidiyow cusub oo daawada diyaaradaha aan duuliye lahayn ee Apple Park ayaa ina tusaya heerka ay hadda marayso
Xaaladdan oo kale Matthew Roberts, ayaa mas'uul ka ah keenista safar cusub oo tayo 4k ah iyada oo loo marayo kuwa ugu dhow ee dhammaaday ...
Apple waxay ku qaban doontaa kulankeeda guud saamileyda tiyaatarka Steve Jobs
sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay US Securities and Exchange Commission Apple waxay qaban doontaa kulankeeda guud ee saamileyda bisha Febraayo ee tiyaatarka Steve Jobs.
Kani waa arjiga 'DJI Assistant 2' ee loogu talagalay Mac iyo diyaaraddaada 'DJI drone'
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaad diyaar u ahaato markaad iibsanayso nooca loo yaqaan 'DJI brand drone' waa ...
9 × 14 Podcast: iMac Pro cusub ayaa halkan yaal
Toddobaadkan #podcastapple waxaan si dheer uga hadalnay iMac Pro cusub oo saacado kooban naga xigaan ...
Apple waxay sii deyneysaa ku habboon bandhigga Hirise Pro ee loogu talagalay iMac Pro
Apple wuxuu soo saaray laba iyo toban South Hirise Pro kormeer buur, oo ku habboon iMac, oo ay ku jiraan iMac Pro ama LG Ultrafine Monitor
Dukaanka Colón Apple ee ku yaal magaalada Valencia ayaa maanta la bililiqaystay
Waxaan ku soo gabagabeyneynaa maanta soo tabinta warar murugo leh waana taas in maanta Apple Store la bililiqaystay ...
Kanaalka iibka shirkadaha ee Apple ayaa loo bilaabi lahaa macaamiisha si ay ugala tashadaan baahiyahooda una siiyaan iMac Pro
U qaabee Barta taabashada si ka duwan BetterTouchTool
BetterTouchTool waxaad ku maamuli kartaa waxyaabaha aad ka arki doonto Baararka Taabashada. Waxaad ku horumarin kartaa kuwa jira ama ku dari kartaa kuwa cusub barnaamijyada.
Safari waxay leedahay muuqaal kuu oggolaanaya inaad ka dhex raadsato ereyada dhexdooda dhammaan tabka ka furan biraawsarka macOS
Falanqaynta Teknolojiyada Safari waxay gaadhaysa nooca 45
Waxyaabo ka badan labadii toddobaad ee caadiga ahaa ayaa laga qaatay Apple si ay u soo bandhigaan noocyadan shabakadda tijaabada ee Safari, tan iyo ...
Apple waxay heshay qalab Podcast ah "Pop Up Archive"
Apple waxay hadda heshay ganacsi bilow ah oo adeegyo siiya soo-saarayaasha nuxurka u ah baahinta Podcast ee loo yaqaan 'Pop Up Archive'
Kuwani waa bangiyadii ugu dambeeyay ee ku biira Apple Pay ee Maraykanka, Australia iyo Hong Kong
Apple Pay waxay sii wadaa ballaarinteeda Australia, Hong Kong waxayna ku dhameystireysaa balaarinteeda Mareykanka 40-kii bangi ee ugu dambeeyay
Waxaan soo bandhignay heerka HDMI 2.1 kaas oo noo oggolaan doona inaan aragno fiidiyow isla markaana aan ku dhagaysanno codka heerarka gudbinta oo ka badan labanlaabka kan hadda jira
Podcast 9 × 12: Apple mar kale waa inay raaligelin bixisaa
Podcast-kii xalay waxaan si dheer ugu hadalnay arrinta muhiimka ah ee amniga ee lagu shaaciyay ...
Apple wuxuu ku darayaa qaybta "Live Sports" qaybta tvOS 11.2 beta
Isticmaalayaasha adeegsanaya nooca beta ee tvOS waxay leeyihiin muuqaalka Ciyaaraha Tooska ah ee barnaamijka TV-ga ee la heli karo
Jilicsanaan muhiim ah oo laga helay macOS High Sierra oo u oggolaanaysa marin u helida Mac-gaaga iyada oo aan erey sir ahi jirin
La ogaaday u nuglaanshaha saameynaya macOS High Sierra maadaama ay u saamaxeyso marin u helka isticmaalaha asalka waxyaabaha kumbuyuutarka. Waxaan ku baraynaa sida loo xaliyo.
Apple wuxuu furayaa Dukaanka Apple ee Downtown Brooklyn maalinta xigta 2 dukaanka nambarka 10 ee New York iyo 499 adduunka.
Haddii aad jeceshahay kumbuyuutarka iMac Pro, halkan waa nuqul ka mid ah nashqadeyntiisa
Waxaan ognahay kumbuyuutar la mid ah kan aan si muuqata u arki doonno iMac Pro. Wuxuu leeyahay koronto kumbuyuutar nambar ah waxayna wadaagaan isku midab
Faa'iidooyinka 'MacBook' ee 2018 waxay lahaan karaan 6 diirkja
Intel wuxuu diyaarin lahaa processor-rada 'MacBook Pro' 2018, kaas oo yeelan lahaa 6 koronto, adoo ilaalinaya isla isticmaalka.
Thanks to Unclutter, waxaan wada maamuli karnaa feylasha, qoraalada iyo waxyaabaha sabuuradda ka kooban isla markaana aad u fudud.
Ka soo saar qoraalka shaashadda shaashadda barnaamijka 'Screenotate' ee loogu talagalay macOS
Screenotate waa codsi noo ogolaanaya inaan ka soo saarno qoraalka sawir ama si dhakhso leh uga helno isku xirka shabakada.
Jonathan Ive wuxuu ka hadli doonaa Nofeembar 29 Washington
Jonathan Ive waxaa sharfay majaladda Smithsonian. Wuxuu wadahadal la yeelan doonaa xubnaha kale ee ku saabsan nidaamka deegaanka ee Apple.
Matthew Roberts, wuxuu ina tusayaa ficil ahaan loo dhammeeyay Apple Park
Tan iyo bishii Sebtember ee la soo dhaafay ma aanan haysan muuqaal cusub oo ku saabsan horumarka Apple Park ee fiidiyowga, ...
Burlingame Apple Store ayaa dib loo furay kadib dayactir weyn
Burlingame halyeeyga Apple Store ayaa dib loogu furey dadweynaha marki dib loogu cusboonaysiiyay isbeddelada cusub ee Apple iyo naqshadeynta noocyada
Gawaarida Khariidadaha Apple ayaa lagu arkaa dalalka Portugal, Spain, Croatia iyo Sardinia
Gaariga Apple wuxuu xoojiyaa qaadashada sawirrada. Markan waxaan awoodnay inaan ku aragno Croatia, Portugal, Madrid iyo Barcelona.
Waan ognahay codsi dhinac saddexaad ah oo xannibaya isticmaalka furayaasha multimedia ee iTunes iyo Spotify. Dabeecadani kuma dhacdo macOS High Sierra.
9 × 10 Podcast: Dhibaatooyin ama Buunbuunin?
Xaaladdan oo kale, #todoApple nambarka Podcast 10 wuxuu diiradda saarayaa ku dhowaad gaar ahaan ogaanshaha ...
Apple iyo DJI waxay isku diyaarinayaan inay midab cusub u soo bandhigaan Mavick Pro drone-ka loo yaqaan ee loo yaqaan 'drone drone'.
Waxayna horeyba ugujireen nooca 44 ee tijaabiyahaan tijaabada ah ee Apple, Safari Falanqaynta Teknolojiyada. Markan at ...
Waxaa lagu qiyaasaa in Apple ay ka iibisay in ka badan 3,9 milyan Apple Watch Q3
Shirkadda cilmi baarista suuqa ayaa ku qiyaastay iibinta Apple Watch 3,9 milyan Q3. Qiyaastii 800.000 oo isticmaale ayaa doortay taxanaha 3 ee LTE.
Xarunta xogta Ireland lama dhisi karo
Ka dib dhowr sano oo aan macno lahayn oo ay degmadu ku taallo halka ay Apple qorsheyneyso inay ka furato xarun xogeed Irland, mashruucii ayaa istaagay
Daraasad ayaa u adeegsanaysa Apple Watch qalab ahaan ka shaqeynta hurdada hurdada iyo dhiig karka
Apple Watch waxaa loo adeegsadaa daraasad ka socota Jaamacadda San Francisco, si loo xakameeyo hurdada hurdada iyo dhiig karka.
Heshiisyada jimcaha madow waxay imanayaan barnaamijyada macOS
Waxaan gacanta ku haynaa xirmo codsiyo ah oo lagu qiimeeyay $ 493 oo kaliya $ 30, oo ay ku jiraan rasiidh. Waxaa ka mid ahaa: Khabiirka PDF iyo Roxio Toast 16 Titanium.
Apple Pay ee Spain hadda waxaa laga heli karaa macaamiisha N26, Openbank iyo Orange Cash
Kordhinta Apple Pay ee Isbaanishka ma istaagayso oo way socotaa. Cinwaanka ayaa muujinaya war ...
Apple waxay iibinaysaa 30 milyan oo AirPods sanadka soo socda
Sida laga soo xigtay falanqeeye ka tirsan Fubon Securities, unugyada AirPods ee Apple iibin karto sanadka soo socda waxay gaari doonaan 30 milyan.
Suurtagalnimada lahaanshaha shirkadda Qualcomm iyo Broadcom, oo ah alaab-qeybiyeyaasha Apple, waa la jaray
Warkii ugu weynaa ee shalay galab wuxuu ahaa, in yar, oo ku habboon mustaqbalka shirkadda saldhigeedu yahay ...
Amazon waxay ka shaqeyneysaa nooc bilaash ah Prime Video oo leh xayeysiis
Jeff Bezos wuxuu bilaabay inuu jiido xarigga si uu u arko suurtagalnimada suurtagalka ah ee bixinta adeeg fidin fiidiyoow bilaash ah oo leh xayeysiisyo leh Amazon Prime.
Nike Waxay Soo Bandhigtay Apple Watch Nike + Series 3 Oo Ay La Yeelatay Fiidkii Xilliga Saqda Dhexe
Nike waxay soo bandhigi doontaa Nofeembar 14, oo ah Apple Watch Nike + taxane ah 3, oo ah midab cawlan iyo madaw Qaabka Loop madaw
Dukaanka Apple ee Australia ee ku yaal Chadstone ayaa si buuxda loo dayac tiray si uu u furmo Nofeembar 24
Apple wuxuu sii wadaa dib-u-habeynta iyo inuu furo dhammaan bakhaarrada uu adduunka ku leeyahay wax yar in yar laakiin si wanaagsan ...
Kordhinta mudada soo noqoshada Apple ee Kirismaska ​​ayaa dhici doonta
Taariikhahan, dhaqan ahaan Apple, waxay ku kordhisaa muddada alaab celinta. Saadaalin ahaan, waxay bilaaban doontaa bisha soo socota ee November 25.
Kaydinta Apple Watch, macOS beta 2, deked badan oo lacag badan lagu bixiyo, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hal maalin oo Axad ah bisha Nofeembar waxaan halkaan u joognaa inaan ku siino isku soo duubista wararka oo Axad walba ...
Apple waxay difaacdaa kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada bulshada fiidiyoow cusub
Tani maahan war cusub oo ku saabsan Apple tan iyo markii ay u dagaallameysay sanado badan inay difaacdo kala duwanaanta ...
Apple waxay soo iibsataa bilowga inVisage, oo ku takhasusay dareemayaasha kamaradaha
Apple waxay heshay shirkad cusub. Tani waa inVisage, khabiir ku ah dareemayaasha kamaradaha moobiilka oo wax badan ku kordhin kara istiraatiijiyadda
Sida laga soo xigtay Mark Gurman, muraayadaha dhabta ah ee Apple ayaa la kordhin doonaa sannadka 2020
Sida laga soo xigtay Mark Gurman, muraayadaha dhabta ah ee Apple ee la kordhiyay ayaa suuqa soo gali doona sannadka 2020, sida laga soo xigtay ilaha gudaha ee Apple oo uu la tashaday
Apple wuxuu balaariyay qorshihiisa 'Qof walba wuu codeyn karaa' meel ka baxsan Mareykanka
Qofkasta wuu awoodaa inuu ku faafo meel ka baxsan Mareykanka ardayda RMIT University ee Australia waxay awoodi doonaan inay bartaan luqadda Swift
Xarunta Booqashada ee Apple Park horey ayey u laheyd taariikh furitaan dadweyne
Isla bishaan Noofambar, aagga booqdayaasha Apple Park wuxuu albaabada u furi doonaa dadweynaha guud. Dhab ahaan, Xarunta Booqashada ee Apple Park
Bayaanka Apple ee bixinta canshuuraha
Toddobaadkan waxaan ku aragnay saxaafadda adduunka oo dhan, ha ahaato farsamo ama ha ahaato, wararka ku saabsan ...
Podcast 9 × 09: IPhone X wuxuu keenaa dareen
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo iPhone Actualidad ayaa kulmay si ay uga hadlaan waxa ku cusub Apple.
"Gacaliye Tim Cook", dhaleeceynta Apple ee ka socota wargayska ugu muhiimsan Jarmalka
Si loo dhigo dhammaan arrimaha la xiriira canshuurta ee Apple ay fulineyso macnaha guud ...
Apple waxay balaarineysaa tirada bangiyada taageera Apple Pay ee Shiinaha iyo Mareykanka
Wiilasha Cupertino waxay ballaariyeen tirada bangiyada taageera Apple Pay ee Maraykanka iyo dhul weynaha Shiinaha.
Midowga Yurub wuxuu ku cadaadinayaa Apple ka qeyb qaadashadeeda "Waraaqaha Jannada"
Dhibaato kale oo xagga dhaqaalaha ah oo ka timaadda wiilasha Cupertino ee ku nool dhulalka Yurub. Sidaan ognahay, dhamaadka usbuucii hore, way soo baxeen ...
Ma rabtaa inaad aragto websaydhka Apple 2001? Mashiinka Wayback ayaa kuu oggolaanaya
Kaliya maahan websaydhka Apple waxaa laga heli karaa xogtan weyn ee aan ka helayno shabakadda, ...
U nuglaanshaha ayaa laga helay TorBrowser oo loogu talagalay macOS oo daadinaysa cinwaanka IP-ga
Cilad cusub oo xagga amniga ah ayaa ka muuqata adduunka macOS. TorBrowser waa biraawsar Firefox-ku-saleysan, oo loo yaqaan inuu yahay ...
macOS High Sierra, Jobs 'BMW, natiijooyinka maaliyadeed, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Jimcihii la soo dhaafay, inbadan oo idinka mid ah oo na raacda waxaan ka imid Mac ayaa durba gacanta ku haya midka aad rabto ...
Ku maaree qaabkaaga mugdiga ah ee Mac-ga barnaamijka bilaashka ah ee 'Night Shifty'
Habka mugdiga ah iyo heerkulka shaashaddaada Mac ayaa hadda lagu maamuli karaa barnaamijka Shift ee bilaashka ah
Adeegyadu waxay siiyaan Apple dakhli aad uga badan waxyaabaha ay soo saaraan
Waxaan maalinta ku dhammeyneynaa maqaal milicsiga ah oo aan rabo inaan kula wadaago fikradaha aan qabay tan iyo ...
Soo-saare ayaa soo bandhigaya waxyaabo badan oo ku saabsan HomePod
Mid ka mid ah horumariyeyaasha softiweer ee HomePod ayaa shaaca ka qaaday howlo cusub oo aan ku qaban karno af-hayeenka caqliga badan ee Apple
Kordhi awoodda garaafyada ee MacBook Pro, oo leh Sonnet Portable GPU
Sonnet waxay leedahay laba xal oo lagu hagaajinayo awooda garaafyada ee Mac-gaaga. Waa xalka ugu fiican ee MacBook Pros hadii aad ubaahantahay inaad wax ka bedesho sawiro ama fiidiyowyo.
Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple rubuca maaliyadeed ee ugu dambeeya
Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple waxay mar kale muujiyeen in caafimaadka maaliyadeed ee shirkaddu weli aad u wanaagsan yahay.
Nalalka iftiinka ee IKEA ayaa ugu dambeyn la jaan qaadi kara Apple HomeKit
Nalalka casriga ah ee IKEA (TR smartDFRI) ayaa ugu dambeyn la jaan qaadi kara barnaamijka 'AppleK HomeKit'. Waa inaad cusboonaysiisaa barnaamijka IKEA nooca 1.2
Tufaaxa Apple ayaa soosaaraysa Muusig Cusub oo Apple Music ah, kor uqaadaya fanaaniin badan
Apple Music ayaa hadda soo saartay fiidiyoow halkaas oo halyeeyaashu ay yihiin albamka farshaxanno fara badan oo kala duwan. Apple Music waxaa laga heli karaa watchOS 4.1
tvOS 11.2 beta 1 ayaa hada loo heli karaa dadka isticmaala beta beta
Laba maalmood ka dib markii la bilaabay tiknoolajiyada ugu horreeya ee tvOS 11.2 beta, Apple ayaa sii daayay isla beta ka dhex jira barnaamijka beta dadweynaha.
Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax ka bedesho xisaabaadka email-ka Apple ID-ga saddexaad ee Apple ID
Apple wuxuu horey u ogolaaday badalida emaylka sadexaad ee loo isticmaalay Apple ID. Hadda waxaad isticmaali kartaa mid ku dhammaada @ mac.com, @ icloud.com ama @ me.com
Markasta oo ay Apple soo saarto badeecad cusub, nuqullo ayaa soo baxa. Nuquladaani mararka qaarkood maahan ...
Nooca ugu dambeeya ee macOS High Sierra iyo nooca 12.7.1 ee iTunes ayaa la soo saaray. Cusbooneysiintu waxay hagaajisaa cilladaha waxayna keentaa emojis cusub
Tim Cook wuxuu la kulmay Madaxweynaha Shiinaha
Mar labaad Tim Cook iyo dhammaan intii la socotay waxay u safreen Shiinaha waxayna la kulmeen madaxweynaha dalkaas.
Angela Ahrendts waxay kahadleysaa Apple Store hada
Angela Ahrendts, oo ah haweeney ganacsato ah oo guuleysatay kana mid ahayd safka shirkadda Apple illaa 2013, ayaa ...